လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Facebook app ကို နာမည်ပြောင်းလဲတော့မည်……. – Nyi Ma Lay
လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Facebook app ကို နာမည်ပြောင်းလဲတော့မည်…….
By Nyi Ma LayPosted on October 22, 2021
Mark Zuckerberg ဟာ မကြာခင် မှာပဲ Facebook ကို “Embrace The Metaverse” လို့ နာမည်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလောက်လူ သုံးများတဲ့ No.1 Social Media ဖြစ်နေ တာ ဘာလို့နာမည်ထပြော င်းလဲမေးစရာ ရှိပေမယ့်၊ Facebook ကို Metaverse တစ်ခုအသွ င်ပြောင်းဖို့က Zuckerberg ရဲ့ အကြာကြီးမက်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နည်းပညာတွေဟာ ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အမြဲဖြစ်နေကျမို့ Survival of the Fittest ပါပဲ။ နည်းပညာအသစ် ကမ္ဘာအသစ်နောက်ကို အမြန်လိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သူသာ ရှင်သန်ကျန်ခဲ့မှာပါ။ Friendster တို့ MySpace တို့ခေတ်ကိုမှီလိုက်သူတွေ သိပါတယ်။
Metaverse ဆိုတာကတော့ Maximalist version of Facebook ပါ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ Virtual World တစ်ခုပေါ့။ ထပ်ရှင်းအောင် မြင်အောင်ပြောရရင် “Ready Player One” ရုပ်ရှင်ထဲက OASIS ကမ္ဘာကြီးပါပဲ။ အဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပဲ OASIS ထဲမှာ Player တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ချင်တာမှန်သမျှအကုန်လုပ်နိုင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Game ဆော့တာကိုပဲဦးစားပေးမြင်ရပေမယ့် တကယ့် OASIS ဟာ Complete Metaverse တစ်ခုပါ)
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ Facebook Metaverse ဟာ 3D မဟုတ်သေးဘဲ 2D ပဲရှိဦးမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Zuckerberg ဟာ 3D VR Headset တွေကို အားစိုက်ထုတ်နေတာ ခုအတော်ခရီးရောက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့ 3D Metaverse Vision ဟာ သိပ်ကိုရှင်းပါတယ်။
ဒါဆိုခု Facebook က Metaverse ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး၊ ဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း နာမည်ကို “Embrace the Metaverse” လို့ပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook ဟာ လက်ရှိမှာ Metaverse မဖြစ်သေးပေမယ့် Mega-App or Mega-Platform တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါပြီ။ Mega-App ဆိုတာက အခြား Apps တွေသုံးစရာမလိုတော့ဘဲ App တစ်ခုတည်းမှာ အလုပ်အတော်များများလုပ်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ခုဆို Link တွေဖွင့်ဖို့ Browser မလိုတော့ဘဲ Facebook အတွင်းမှာဖွင့်နိုင်တာ၊ Chat, Video Call တွေအတွက် Messenger, အလုပ်အတွက် WhatsApp, ဈေးရောင်းဖို့ Marketplace, ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ Page, Gaming အတွက် Facebook Gaming, Community တွေအတွက် Group စတာတွေက Metaverse တစ်ခုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံတွေပါပဲ။
Complete Metaverse တစ်ခုဟာ မိုးလင်းအိပ်ယာထတာကနေ မိုးချုပ်အိပ်ယာဝင်တာထိ ထိုင်ရာကမထ လုပ်ငန်းမှန်သမျှ Metaverse ထဲမှာပဲ အကုန်လုပ်နိုင်တဲ့အထိ Real Life Synchronization ရှိရမယ်၊ Fully Functioning Economy & Currency ရှိရမယ်၊ နောက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးက Cross Platform Interoperability လို့ခေါ်တဲ့ Data, Information, Items, Assets တွေကို Platform မျိုးစုံကနေ လွှဲပြောင်းနိုင်ရမယ်။
ဥပမာ… Fortnite ထဲက Avatar Skin ကို Valorant ထဲမှာသုံးလို့ရသလိုမျိုး၊ Real Life က EDM ပွဲကိုမသွားတော့ဘဲ ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ VR Headset တပ်ပြီးကဲဖို့ အပြင်ကဝယ်ထားတဲ့ Ticket ကို Metaverse မှာပြန်သုံးလို့ရသလိုမျိုးပေါ့။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် Corporate Staff တစ်ယောက် အလုပ်သွားစရာမလိုတော့ဘဲ Metaverse ထဲမှာပဲ ရုံးတက်အလုပ်ထိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတွေးကြည့်ရင်တော့ အတော်ရှုပ်ထွေးပြီး အဝေးကြီးဆက်သွားရမဲ့ ခရီးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Zuckerberg က တကယ်ကြီးကို Metaverse တစ်ခုဆောက်ဖို့ ပြင်နေတယ်ဆိုတာ အသေအချာမို့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ Future Internet Social Life ဟာ သိပ်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံအသီးသီးက အစိုးရတွေကလည်း Metaverse တစ်ခုဖြစ်လာပြီး အရာရာထိန်းမနိုင်သိမ်းမရတွေဖြစ်ကုန်မှာကြောက်လို့ Facebook ကို အဖက်ဖက်က ဖိအားပေးနေဦးမှာပါ။
ကျနော်ကတော့ Zuckerberg ရဲ့ 3D Metaverse ထဲမှာ မသေခင်တော့ ဝင်ကဲသွား ချင်ပါသေးတယ်။ Credit
Mark Zuckerberg ဟာ မၾကာခင္ မွာပဲ Facebook ကို “Embrace The Metaverse” လို႔ နာမည္ေျပာင္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္…
ဒီေလာက္လူ သုံးမ်ားတဲ့ No.1 Social Media ျဖစ္ေန တာ ဘာလို႔နာမည္ထေျပာ င္းလဲေမးစရာ ရွိေပမယ့္၊ Facebook ကို Metaverse တစ္ခုအသြ င္ေျပာင္းဖို႔က Zuckerberg ရဲ့ အၾကာႀကီးမက္ခဲ့တဲ့ အိမ္မက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…
ကမၻာေပၚမွာ နည္းပညာေတြဟာ ေပၚလာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္အျမဲျဖစ္ေနက်မို႔ Survival of the Fittest ပါပဲ။ နည္းပညာအသစ္ ကမၻာအသစ္ေနာက္ကို အျမန္လိုက္ေျပာင္းလဲနိုင္သူသာ ရွင္သန္က်န္ခဲ့မွာပါ။ Friendster တို႔ MySpace တို႔ေခတ္ကိုမွီလိုက္သူေတြ သိပါတယ္။
Metaverse ဆိုတာကေတာ့ Maximalist version of Facebook ပါ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ Virtual World တစ္ခုေပါ့။ ထပ္ရွင္းေအာင္ ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ “Ready Player One” ႐ုပ္ရွင္ထဲက OASIS ကမၻာႀကီးပါပဲ။ အဲ့႐ုပ္ရွင္ထဲကလိုပဲ OASIS ထဲမွာ Player တစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ခ်င္တာမွန္သမၽွအကုန္လုပ္နိုင္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ (႐ုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ Game ေဆာ့တာကိုပဲဦးစားေပးျမင္ရေပမယ့္ တကယ့္ OASIS ဟာ Complete Metaverse တစ္ခုပါ)
လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ Facebook Metaverse ဟာ 3D မဟုတ္ေသးဘဲ 2D ပဲရွိဦးမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း Zuckerberg ဟာ 3D VR Headset ေတြကို အားစိုက္ထုတ္ေနတာ ခုအေတာ္ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ 3D Metaverse Vision ဟာ သိပ္ကိုရွင္းပါတယ္။
ဒါဆိုခု Facebook က Metaverse ျဖစ္ေနၿပီလားဆိုေတာ့ မျဖစ္ေသးပါဘူး၊ ျဖစ္လာဖို႔ျပင္ဆင္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း နာမည္ကို “Embrace the Metaverse” လို႔ေပးတာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
Facebook ဟာ လက္ရွိမွာ Metaverse မျဖစ္ေသးေပမယ့္ Mega-App or Mega-Platform တစ္ခုေတာ့ျဖစ္ေနပါၿပီ။ Mega-App ဆိုတာက အျခား Apps ေတြသုံးစရာမလိုေတာ့ဘဲ App တစ္ခုတည္းမွာ အလုပ္အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္နိုင္တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ခုဆို Link ေတြဖြင့္ဖို႔ Browser မလိုေတာ့ဘဲ Facebook အတြင္းမွာဖြင့္နိုင္တာ၊ Chat, Video Call ေတြအတြက္ Messenger, အလုပ္အတြက္ WhatsApp, ေဈးေရာင္းဖို႔ Marketplace, ဆိုင္ဖြင့္ဖို႔ Page, Gaming အတြက္ Facebook Gaming, Community ေတြအတြက္ Group စတာေတြက Metaverse တစ္ခုအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြပါပဲ။
Complete Metaverse တစ္ခုဟာ မိုးလင္းအိပ္ယာထတာကေန မိုးခ်ဳပ္အိပ္ယာဝင္တာထိ ထိုင္ရာကမထ လုပ္ငန္းမွန္သမၽွ Metaverse ထဲမွာပဲ အကုန္လုပ္နိုင္တဲ့အထိ Real Life Synchronization ရွိရမယ္၊ Fully Functioning Economy & Currency ရွိရမယ္၊ ေနာက္ၿပီးအေရးအႀကီးဆုံးက Cross Platform Interoperability လို႔ေခၚတဲ့ Data, Information, Items, Assets ေတြကို Platform မ်ိဳးစုံကေန လႊဲေျပာင္းနိုင္ရမယ္။
ဥပမာ… Fortnite ထဲက Avatar Skin ကို Valorant ထဲမွာသုံးလို႔ရသလိုမ်ိဳး၊ Real Life က EDM ပြဲကိုမသြားေတာ့ဘဲ ကိုယ့္အိပ္ခန္းထဲမွာပဲ VR Headset တပ္ၿပီးကဲဖို႔ အျပင္ကဝယ္ထားတဲ့ Ticket ကို Metaverse မွာျပန္သုံးလို႔ရသလိုမ်ိဳးေပါ့။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ Corporate Staff တစ္ေယာက္ အလုပ္သြားစရာမလိုေတာ့ဘဲ Metaverse ထဲမွာပဲ ႐ုံးတက္အလုပ္ထိုင္လုပ္နိုင္တဲ့အထိျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာေတြးၾကည့္ရင္ေတာ့ အေတာ္ရႈပ္ေထြးၿပီး အေဝးႀကီးဆက္သြားရမဲ့ ခရီးတစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ Zuckerberg က တကယ္ႀကီးကို Metaverse တစ္ခုေဆာက္ဖို႔ ျပင္ေနတယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာမို႔၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ Future Internet Social Life ဟာ သိပ္ရင္ခုန္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။
နိုင္ငံအသီးသီးက အစိုးရေတြကလည္း Metaverse တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အရာရာထိန္းမနိုင္သိမ္းမရေတြျဖစ္ကုန္မွာေၾကာက္လို႔ Facebook ကို အဖက္ဖက္က ဖိအားေပးေနဦးမွာပါ။
က်ေနာ္ကေတာ့ Zuckerberg ရဲ့ 3D Metaverse ထဲမွာ မေသခင္ေတာ့ ဝင္ကဲသြား ခ်င္ပါေသးတယ္။ Credit
Previous post လူသားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ အတွင်းက ဧရာမ ဆားတောင်ကြီး
Next post ကြော်ထားတဲ့ အကြော်တွေက ခဏလေးနဲ့ ပျော့သွားတယ် ဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်မတို့ အတွက် အချဉ်ဖျော်နည်း နဲ့ အကြော် ကြော်နည်းလျို့ဝှက်ချက်